शेरधन राई « Office of the Chief Minister and Council of Ministers, Province No. 1
भोजपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने थिदिङ्खा गाउँ विकास समिति वडा नं ५ पसलभञ्ज्याङ हालकाे अामचाेक गाउँपालिका ३ मा सामान्य किसान परिवारमा वुवा जागीरमान रार्इ र अामा राम्रीमाया रार्इबाट २०२७ साल फागुन ११ गते शेरधन रार्इकाे जन्म भएको हो । बुबा जागीरमान राई कुनैबेला पंचायतकालमा पनि गाउँबाट निर्विरोध वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । वहाँको यो वडाध्यक्षको निर्विरोध पद बहुदलपछि पनि कायम रह्यो । पंचायतकालमा तीनपटक र बहुदलपछिका दुई निर्वाचनमा वहाँ गाउँको निर्विरोध वडाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । गाउँको विकास र गाउँबासीका समस्यासँग घुलमिल भईरहने कार्यले गर्दा उहाँ स्थायी जनप्रतिनिधि जस्तो हुनुहुन्थ्यो ।
आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको संशोधित सूचना
आवश्यक मेशिनरी सामान खरिदको सूचना
Office of the Chief Minister and Council of Ministers, Province No. 1, Biratnagar, Nepal